रक्सी धेरै पिएपछि किन हुन्छ 'ह्याङओभर' र कसरी जोगिने ? - Dainik Online Dainik Online
रक्सी धेरै पिएपछि किन हुन्छ ‘ह्याङओभर’ र कसरी जोगिने ?
प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार २ : ४९
काेरोना महामारीका बीच यस वर्ष हिन्दू नेपालीहरुले दशैं मनाउँदै छन् । देवीको उपासनाका साथ साथै यो मनोरञ्जन भेटघाट र खानपाको पनि पर्व हो ।
यसक्रममा मदिरा अर्थात रक्सीको खपत पनि निकै हुने गरेको छ ।
साथी भाइ वा परिवारसँग बसेर रक्सी पिउँदा रमाइलै हुन्छ तर रातिको पार्टी सकिएपछि टाउको भारी हुन थाल्छ, बान्ता र रिँगटा लाग्न थाल्छ। थकाइ अनुभव हुन्छ।
यो हजारौँ वर्ष पुरानो चुनौती हो ।